Ciidanka Xoogga Dalka oo Shabaab ka saarey deegaano katirsan Shabeelada Hoose | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ciidanka Xoogga Dalka oo Shabaab ka saarey deegaano katirsan Shabeelada Hoose
Ciidanka Xoogga Dalka oo Shabaab ka saarey deegaano katirsan Shabeelada Hoose
Muqdisho(SONNA) Ciidamada Xooga Dalka Soomaaliyeed oo ku sugan Gobolka Shabeelada Hoose ayaa maant gaaray deegaanada Mareerey,Sabiible iyo Caanoole halkaasi oo ay horey ugu sugnaayeen maleeshiyada SHabaab.
Maleeshiyadii Shabaab ayaa lagu soo waramaya in ay faarujiyeen deegaanadaasi markii ay dareemeen culeys militari oo kaga yimid ciidanka Xoogga Dalka oo u taagan sidii shacabka Soomaaliyeed ay uga Difaaci lahaayeen Cadowga Shabaab.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeelada Hoose Ibraahim Aadan Cali (Najax) ayaa Wakaaladda Wararka SONNA u xaqiijiyay in Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ay gaareen deegaandaasi,taasi oo qeyb ka ah howlgalada ka dhanka ah Argagixisada Shabaab.
Koxdii Shabaab oo deegaanadaasi ku sugnayd ayaa lagu soo waramaya in ay u kala firxadeeen howdka islamarkaana lagu raad joogo meelihii ay galeena ay ciidamadu uga daba tagayaan meelaha ay maleeshiyadaasi ku dhuumaalaysanayaan.
Previous articleSalaadii Jimcaha kadib oo boqolaal dad ah isugu tagay Isgoyska Soobe
Next articleAgaasimaha SONNA oo booqday Qunsuliyadda Soomaaliya ee Sucuudiga